El Galaxy S10 comienza a recibir la actualización de seguridad correspondiente a Abril | Androidsis
I-Galaxy S10 iqala ukufumana uhlaziyo lokhuseleko oluhambelana no-Epreli
I-Galaxy S10 kwiindidi zayo ezintathu, siseto seSamsung sokuphela kwalo nyaka kwaye okwangoku siyivumela ukuba iqhubeke umthengisi omkhulu we-smartphone eYurophu. Esi sisiphelo sendlela sifumene uhlaziyo olutsha, uhlaziyo lokhuseleko lwenyanga ka-Epreli.
Kwiintsuku ezidlulileyo, ezinye iiterminal kuluhlu lweGalaxy bezisele zifumene uhlaziyo oluhambelanayo, uninzi lwazo luhamba nohlobo lokugqibela lwePie ye-Android, efana neGPS J8 kunye neGPS J6. Olu hlaziyo luqale ukufumaneka eSwitzerland kodwa kungekudala luza kwandiswa liye kwamanye amazwe.
Kwiiveki ezidlulileyo, ibiyiGlass S9 kunye ne-S9 + iiterminal zenkampani yaseKorea ezafumana uhlaziyo oluhambelanayo kwi-Android Pie, njengeNqaku 9 kwaye ngaphambili i-Galaxy Note 8. Ngoku lithuba lokuvela kwazo zonke iimodeli ezikuluhlu lweGlasi. S10: S10e, S10 kunye S10 +. Olu hlaziyo alunikeli zinkcukacha zezokhuseleko ezisetyenzisiweyo kuzo zombini iinguqulelo ze-Android ezilawulayo kunye nolwahlulo olutsha lwe-Samsung olubizwa ngokuba yi-UI enye.
I-Galaxy S10e ingaphantsi kunokuba bekulindelwe
Isamsung yazisa i-Galaxy S10e ukuvumela abasebenzisi abebesoloko befuna ukonwabela uluhlu lweGPS S ukuba benze njalo ngaphandle kokuchitha phantse i-euro ezi-1000. Nangona kuyinyani ukuba abasiboneleli ngezibonelelo ezifanayo, Sisiphelo esimnandi ngokwexabiso lemali.
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi zombini i-S10 kunye ne-S10 + zizitishi zolu luhlu ezinyangeni zokuqala Zijolisa uninzi lwentengiso eYurophu njengaseMelika. Ngokufanelekileyo, njengoko iinyanga zihamba, i-S10e sisiphelo esilawula ukuthengisa oko kulindelwe kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Galaxy S10 iqala ukufumana uhlaziyo lokhuseleko oluhambelana no-Epreli
I-LG X4 2019: Uluhlu lokungena olutsha kraca